Wararka Dibadda – Page 7 – Shabakadda Amiirnuur
Ugu yaraan 100 haween ah ayaa laga soo sheegay in lagu diley Kenya sanadka 2019. Taas macnaheedu waa in celcelis ahaan, 8 dumar ah ay naftooda waayaan bil kasta. Haweenkan qaarkood ayaa waxaa dilay raggoodii, qaar kalana waxaa lagu soo dilay meelaha dalxiiska iyo tamashleynta. Xogtan oo laga soo uruuriyay […]
Warshado badan oo dharka ku farsameyn jiray Masar islamarkaana soo saari jiray dhaqaale badan ayaa lagu soo waramayaa iney xirmeen. “Dharka Shiinaha wuxuu xiray warshadeheena wuxuuna dumiyay guryaheena,” waa hadaladda ay haatan ku calaacalayaan qaar badan oo kamid ah ganacsatada Masaarida xilligan. Mid kamid ah shaqaalaha warshadaha xirmay ayaa sheegay […]
Itoobiya oo Foolaneysa Khilaaf Hor Leh oo Ku Saabsan Doorashada Soo Socota.
Telefishanka rasmiga ah ee Itoobiya ayaa Arbacadii shalay ahayd shaaciyey in Golaha Qaranka ee Doorshada Itoobiya ay soo saareen shahaado rasmi ah oo aqoonsi u ah xisbiga Ra’isal Wasaare Abiy, oo ah tallaabo jidka u xaareysa doorashooyinka la qorsheeyay 2020. Golaha doorashada Itoobiya oo isku tilmaamay hey’ad madaxbannaan ayaa sheegay […]
Daraasad: Nolosha Kiristanka Kenya oo %60 Ka Liidata Sannadkii Hore. Sabab?
Baadhitaan ay sameeyeen Trends for Insight Africa ayaa lagu ogaaday in 60% dadka reer Kenya ay noqdeen kuwa liita bishan Diseembar ee sannadkan marka la barbar dhigo xaaladooda sannadkii lasoo dhaafay bishan oo kale. Daraasadda oo ay sameysay hay’adda cilmi baarista ee Afrika ayaa gabagabadeeda ku tilmaamtay mid sawir xun […]
Waa Maxay Halista Ugu Weyn Ee Ay Wajahayaan Saliida Iyo Gaaska Mareykanka Sanadka Soo Socda?
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2019, waaxda saliida waxay aragtay isbadallo badan oo la xiriira jawiga siyaasadeed iyo cimilada adduunka, iyadoo baahida loo qabo koritaanka ay gaartay heerkeeda ugu hooseeya. Warbixin ay daabacday OilPrice, Tsvetana Paraskova waxay ka hadashay halista ugu caansan ee ku wajahan warshadaha saliida ee dunida 2020. Caqabadaha […]
DHEGEYSO Barnaamij Gaar Ah; Hiiraan Iyo Horumarka Diinta Qaybta 1-Aad
Hiiraan waa gobal weyn oo Soomaaliya ka mid ah waxaana dega qabaa’il badan oo walaalo ah. Waa gobal ku wanaagsan xoolo dhaqashada iyo wax soo saarka xaga beeraha ah intaba, waxaana qaybo ka mid ah mara webigga Shabeelle oo beeralay badan ka faa’iideystaan. Magaalooyinka gobalka waxa ka mid ah Beledweyne […]
Mar weliba waxay reer galbeedku gaarayaan xaqiiqooyin caafimaad oo ay horey uga hadashey diinta Islaamka, waxaana warbixin cusub oo soo baxday ay sheegeysaa in reer galbeedku ay markan fahmeen halista caafimaad ee ay leeyihiin Eeyaha. Wareegto kasoo baxday saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Maraykanka ayaa waxaa lagu amray muwaadiniinta Ameerikaanka ah […]
26 Ruux oo ku dhintay Duqeymo ka dhacay wuqooyiga Suuriya.
Wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa ku waramaya in maalintii shalay uu dalkaas ka dhacay duqeymo xoogan oo ay fuliyeen diyaarradaha dowladda Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bashaar Al-Asad. Duqeymaha oo ahaa kuwa xoogan oo aan loo meel dayin ayaa ka dhacay deegaannada Macsaraan, Talmanas, iyo Badaama, waxaana ku dhintay dadweyne […]
Perves Musharraf oo lagu xukumey Dil toogasho ah.
Maxkmad ku taalla wadanka Pakitaan ayaa dil toogasho ah ku xukuntey madaxweynihii hore ee dalka Pakistaan, qaab milliterynimana ku maamulayay wadanka ee Pervez Musharaf, kaas oo hadda dibad joog ah. Afhayeen u hadlay maxkamadda wadanka Pakistaan ayaa sheegay in Perves Musharraf lagu helay eedeymaha loo soo jeediyay ee ay kamid […]